Siilaanyo iyo Bajaaj ma awoodaan inay diidaan ka qeybgelida shirka London?
Topnews:-Siilaanyo iyo Bajaaj ma awoodaan inay diidaan ka qeybgelida shirka London?
17 March 2013 Waagacusub.com-Waa Sheeko laab lakac iyo qiiro jabaan ku dhisan hadalada ka soo yeeray Maamulka Somaliland ee lagu shaaciyay inaysan ka qeybgeli doonin shirka London. Dad badan ayaa qiiro marqaanka dhab mooday oo dariiq walba la taagan in Siilaanyo go''aan geesinimo leh ku qaadacay ka qeybgelida shirka London laakiin xaqiiqadu waxay tahay si taasi ka duwan.
Hadii aan si kooban u xeerino dhaqanka looga bartay xulufadda Siilaanyo iyo xaqiiqadu waxay tahay,kaliya waxaan dhihi karnaa 7 May Siilaanyo iyo Wasiir Bajaaj ka eeg Shirka London,hadii ay ka soo dhexmuuqdaan ,ha walwalin ,ha walaacin hana u qaadan dhacdo aad riyo moodo balse u faham in dhawaqii aad shalay maqashay ahaa qiiro Marqaan.
Maamulka Somaliland waa ku qasban yahay inuu ka qeybgalo Shirka London 7 May ka dhacaya,waa hadii lagu casuumo.
Hadii Maamulka Siilaanyo ka qeybgeli waayana saadaasha iyo xooraansiga Waagacusub waa dhalanteed.waxaanse ku xasuusinayaa maanta waa 17 March 2013 sidaas darteed waa inaan dib u kulano bilaha April ama May si aan kuu tuso xaqiiqada warkaan.
Sababaha aan sidaan kalsoonida leh ugu hadlay kaliya waxay tahay in Shacabka Somaliland gaar ahaan kuwa beesha dhexe been iyo qiyaali loo sheego.
Xaqiiqadu waxay tahay rabitaanka shacabka Somaliland iyo damaca xulufada Siilaanyo waa mid aad u kala duwan maxaa yeelay bulshadu waxay moodaa in Siilaanyo ku maqan yahay dantooda laakiin wuxuu ku maqan yahay ku mashquulsan yahay dantiisa gaarkaa ,dantooda gaarkaa .
Waa dhici kartaa in dadka qaarkiis ii qaataan Mucaarad balse ANIGAA TAABTAY XEERADA SALKEEDA. (NO COMMENT)